FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA TAMIKANA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika tamikana
Sary natolotry ny Tamaskan Dog Register
Ny Tamaskan Dog dia alika miasa lehibe ary toy izany dia manana endrika atletisma azy. Mitovy habe amin'ny mpiandry zanak'olo-mpiray tam-po aminy ilay mpiandry ondry alemanina, ny Tamaskan dia manana endrika toy ny amboadia manana palitao matevina ary rambony lava sy mahitsy. Izy io dia misy loko telo lehibe amin'ny volondavenona mena, volondavenona ary mainty fotsy. Ny maso mavo amin'ny alàlan'ny amber sy volontany, na dia tsy fahita firy aza ny maso maivana.
Alika fianakaviana tsara ny Tamaskan, malemy fanahy amin'ny ankizy ary manaiky alika hafa. Ny fahalalàny avo lenta dia nahatonga azy ho alika miasa tsara ary ny Tamasianina dia fantatra fa mahery lavitra noho ny hakingana sy ny fankatoavana ary koa ny hazakazaka antsamotady. Aleon'ity alika fonosana ity tsy avela irery mandritra ny fotoana maharitra. Mety kokoa amin'ny orinasa olombelona na kaninina hafa izany. Hamarino tsara fa mpitarika alika alika ity ianao, manome betsaka fanazaran-tena ara-tsaina sy ara-batana isan'andro hialana fanahiana fisarahana . Ny tanjona amin'ny fampiofanana ity alika ity dia ny hahatratrarana ny toeran'ny mpitarika entana. Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa miaina miaraka amin'ny alika isika olombelona dia lasa fonosin'izy ireo isika. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra mazava ny tsipika. Ianao sy ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Izay no fomba tokana hahombiazan ny fifandraisanareo.
Haavony: Lehilahy 25 - 28 santimetatra (63 - 71 cm) Vehivavy 24-27 santimetatra (61 - 66 cm)
Milanja: Lehilahy 66 - 99 pounds (30 - 45 kg) Vehivavy 50 - 84 pounds (23 - 38 kg)
Voamarina fa nisy alika 3 ny androbe, saingy amin'ny fiompiana am-pitandremana dia tsy avela hiteraka ireo andalana nitondra an'io. Betsaka koa ny alika hita fa mpitatitra ny Degenerative Myelopathy (DM), ka ankehitriny izy ireo dia mizaha ny alika mpiompy DM mba hisorohana izay mararin'ny aretina azo avy amin'ny fototarazo. Ny razamben'izy ireo Husky sy German Shepherd dia samy nijaly tamin'ny dysplasia hip ary mba hiambenana avy amin'izany ny Tamaskan Register dia manitrikitrika fa ny tahiry fiompiana rehetra dia tokony homena alohan'ny fanambadiana ary izy ireo dia mitazona 8.1 eo ho eo.
Ny Tamaskan Dogs dia tsy atolotra amin'ny fiainana an-trano raha avela irery mandritra ny fotoana maharitra dia mety hanimba na hanandrana handositra. Tokony hanana zaridaina lehibe izy ireo na farafaharatsiny avela handeha malalaka isan'andro.
Ny Tamaskan Dog dia mavitrika tokoa ary mila fanatanjahan-tena betsaka, izay misy a diabe isan'andro, lava, haingana na jogging. Afaka ajanona tsy hitarika izy ireo ary hiverina raha voaofana. Mila mihazakazaka maimaim-poana izy ireo ary koa manao fanazaran-tena satria tena manan-tsaina izy ireo. Ny ankamaroan'ny alika tamasiky dia mora zatra nefa maditra matetika. Izy ireo dia azo iasaina amin'ny Agility, Obedience, Musical Freestyle ary hisintona.
Salanisan'ny 14-15 taona
Ny alika tamasiky dia mila fikolokoloana kely angamba borosy tsara indray mandeha isan-kerinandro ary bebe kokoa mandritra ny fotoana mitsaoka.
Avy any Failandy ny Alika Tamas. Alika karazana Husky dia nafarana avy any Etazonia tamin'ny voalohan'ny taona 1980. Ireo dia nafangaro tamin'ny alika hafa, ao anatin'izany Husky Siberia , Alaskan Malamute ary vola kely an'ny Mpiandry Alemanina . Ny tanjona dia ny hamoronana karazana alika izay toa amboadia ary manana faharanitan-tsaina sy fahaizana miasa tsara. Vao haingana kokoa, mba hanatsarana ny rà mandriaka, dia alika hafa manana fiaviana Husky no nampidirina tao amin'ny fandaharanasa fiterahana. Ankehitriny dia nitarina ny pisinina fototarazo, ny mpiompy Tamaska ​​dia tsy afaka manambady afa-tsy Tamasany mankany Tamas ary mamorona alika vaovao. Ny fahalianana amin'ny Tamaskan Dog dia nitombo tsimoramora ary ankehitriny dia misy ny Tams Dogs any UK, Etazonia ary manerana an'i Eropa, noho ny ezaky ny The Tamaskan Register, ilay birao fisoratana anarana ofisialy.
TDR = Ny fisoratana anarana an'ny alika Tamas
Chow sy volamena retriever alika kely afangaro
alika weiner mifangaro amin'ny yorkie
afangaro ny saoka chihuahua japoney amidy